Mogadishu Journal » Taliyaha ciidamada Booliska oo magacaabay taliyaal cusub
Taliyaha ciidamada Booliska oo magacaabay taliyaal cusub
Mjournal :-Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa magacaabay Saddex Taliyaal cusub ee ciidamada booliska ah.
Taliyaasha cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay taliyaal ka noqonayaan saldhigga Booliska garoonka diyaaradaha,Akademiyada Ciidanka boliiska iyo Taliyaha ciidanka Miino Baarista Booliska.
Taliyaha saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa loo magacaabay Cabdifitaax Bashiir Mire Cali.
Sidoo kale Cabdikariin Macalin ayaa loo magacaabay Taliyaha Akademiyada Ciidanka boliiska.
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sidoo kale magacaabay Taliyaha Ciidanka Miina Baarista boliiska, Sarkaalka loo magacaabay oo magaciisa lagu sheegay Asad ayaa ka tirsanaa muddo dheer qeybta Miina Baarka ee Booliska Soomaaliya.
Nin hubeysnaa oo Askari ku dilay Muqdisho oo isna goobta lagu toogtay
Wafdi ka socda UK oo gaaray Garowe kulamana la qaatay Madaxda Puntland